Kg200kg / igubu, 16mt / FCL okanye itanki ISO ISOUN No 299, Class: 6.1, Ukupakisha iqela: I, Methyl fluoroacetate yimichiza eyityhefu kakhulu, nto leyo ukukhuthaza amehlo, inkqubo yokuphefumla kunye nolusu, kwaye kuyingozi ukuba uqhagamshelane ngengozi. I-FLUOROACETIC acid inokutsha kwaye inokuvelisa i-hydrogen fluoride gas, ikhemikhali enetyhefu, xa itshisiwe. Ityhefu ye-methyl fluoroacetate kukuba i-hydrolyzes yenze i-FLUOROACETIC acid, edibanisa ne-coenzyme A yeseli ye-mitochondria ukwenza i-fluoroacetyl CO ...
I-Catalyst kwi-polyurethane, ifakwe kwi-polyurethane foam rigid kunye ne-elastomer ukwandisa ubomi bembiza, ukukhawulezisa ukuphendula kunye nokwandisa uxinano lokugqibela lwe-cross-lin. CanIngasetyenziswa njenge-arhente yokunyanga i-epoxy resin, ukuphucula iipropathi zoomatshini ezinje ngokugoba, ukuzolula kunye nokucinezela, ukuphucula iipropathi zombane zokugquma kunye nokumelana neekhemikhali. Isetyenziswa kakhulu kwiikhompyutha nakwizinto zombane; isetyenziswa kwiibhodi zesekethe eziprintiweyo kunye neesekethe ezihlanganisiweyo njenge ...
Inkangeleko: Mhlophe phantse ukuba yikristali emhlophe, ukucoceka kwe-hygroscopic (Titration): 99.0% min Amanzi: 1.0% max Toluene: 0.2% max ukungcola okungaziwayo: 0.05% max Ukungcola okupheleleyo: 0.2% max PH ixabiso: 11-12.5 25kg / igubu, 9Mt / Izinto ze-FCL ezingenabungozi ☑ Isetyenziswa kumayeza. ☑ ICyclen kunye nezinye izinto zayo zibonisa ukulungelelanisa iipropathi zentsimbi zentsimbi, ii-cations zensimbi enzima, i-lanthanide kunye ne-actinide ions, kunye ne-organic okanye inionic anion. Ukuziphatha ngokuchanekileyo komjikelo kunye ...
Ii-Amines, i-C10-C14-tert-alkyl, CAS 3003-25-2, (R) -3-Aminobutanol, I-CAS 453-18-9, 2-Methyl resorcinol, I-CAS 608-25-3,